आज वाम एकता संयोजन समितिको वैठक, टुंगो लाग्ला त ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
आज वाम एकता संयोजन समितिको वैठक, टुंगो लाग्ला त !
काठमाडौं, २ फागुन – नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन आज पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने भएको छ। हिजो मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको दुईपक्षीय छलफलबाट संयोजन समितिको वैठकबाट एकताको टुंगो लगाउने सहमति भएको हो।
नयाँ सरकार गठन अघि नै पार्टी एकतालाई टुंगोमा पुर्याउन र एकीकृत पार्टीको खाका तयार पार्न भन्दै दुई पार्टीका अध्यक्षले निरन्तर छलफल, भेटघाट गर्दै आएका छन्। ‘बुधबार एकता समतिको वैठक बसेर एकताको विषयमा छलफल हुनेछ’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘त्यसअघि दुवै अध्यक्षबीच वार्ता हुनेछ ।’
पार्टी एकतालाई सरकार गठन अघि नै टुंगाउने उद्देश्यलये समितिको वैठक हुन लागेको जनाइएको छ । यसअघि दुवै पार्टीका अध्यक्षबीच पार्टी एकतालाई अघि बढाउन दुवैजना सहअध्यक्ष पार्टीमा रहने गरी छलफल भएको थियो ।
गत असोज १७ गते पार्टी एकतासहित चुनावी तालमेलमा छिरेका एमाले र माओवादीबीच पछिल्लो दिनमा एकताको विषयमा धेरैपटक दुई अध्यक्ष बीच छलफल भैसकेको छ । यद्यपी एकताका विषयमा आशंका समेत सुनिने गरेका छन् ।
दुवै पक्षबीच सहमति भएको विषयबाहेकलाई अन्य विषयलाई एकता महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्ने सहमति गरेका दुवै दलको माक्र्सवाद र लेनिनवाद सिद्धान्तका रुपमा रहनेछ । महाधिवेशनसम्म हाल एमालले मार्गनिर्देशक मान्दै आएको बहुदलीय जनवादी र नेकपा माओवादीको माओवाद अन्तिम टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । त्यसअघि पार्टीभित्र बहस गर्ने सहमति भएको छ ।
नवलपरासीम बस दुर्घटना, ६ को मृत्यु, ५९ घाइते
करेन्ट लागेर १४ बर्षीय बालकको मुत्यु